Ithuluzi lokugaya ukhonkolo laseChina le-PCD lemishini yokugaya i-Lavina abakhiqizi nabaphakeli |Idayimane ye-ZL
Leli thuluzi lokugaya le-PCD liza nama-PCD angu-2 wekota eyi-1/4 kanye nengxenye yomhlatshelo wedayimane esebenza njengesiqondisi sokuzinzisa nokujula.
Ingxenye yomhlatshelo ingaphansi kancane kune-PCD ukuze kuqinisekiswe ukuthi ama-PCD asebenza kahle kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni.
Leli thuluzi le-PCD lokugaya liklanyelwe ukugaya liye endaweni ethize, kungaba ngokwewashi (ukuzungezisa kwesokunxele) noma ngokuphambene newashi (ukuzungezisa kwesokudla).
Leli thuluzi le-PCD lokugaya liza nepuleti le-Lavina wedge-in ukuze lilingane nemishini yokugaya i-Lavina floor.
Ipuleti le-wedge-in liza nezimbobo ezingu-3-M6, lingasetshenziswa njengama-trapezoid ajwayelekile futhi lilingane nezinhlobonhlobo ezibanzi zokugaya phansi.
Leli thuluzi lokugaya le-PCD lilungele ukususwa okunolaka kwesitoko nezingubo ezifana ne-epoxy, iglue, i-mastics, i-thinset, i-resin, upende, njll. Lisusa okokunamathela phansi kukakhonkolo ngaphandle kokushiya iphrofayili eqinile endaweni kakhonkolo.
I-Z-LION PCD-20 Lavinaamathuluzi wokukhipha i-pcd coatingyakhelwe ukuthi isetshenziselwe emishinini yokugaya ephansi ye-Lavina yokukhipha zonke izinhlobo zezingubo ezisuka kukhonkolo phansi.Izici ezikhethekile zaleli thuluzi zimi kanje:
Ama-PCD akhiqizwa ngobuchwepheshe obuyindida, umfutho ophezulu kanye nokushisa okuphezulu.Zinokuqina okuphakeme, amandla aphezulu okuphuka kanye nezakhiwo ezifaniswayo, ziqine kakhulu kune-carbide enokumelana okuphawulekayo kokugqoka.
Idizayinwe ngokukhethekile ngesegimenti yedayimane enolaka(ibha yomhlatshelo) esebenza njengesizinzisi kanye nomhlahlandlela wokujula ukuze kuqinisekiswe ukugaya okushelelayo ngaphandle kokugoqa phansi ukhonkolo nokushiya amaphrofayili amaholo kuwo.Ibha yomhlatshelo iphinde inikeze inqubo evamile yokugaya endaweni ekhonkolo.
Amathuluzi e-PCD anesegimenti yomhlatshelo anolaka futhi asebenza ngokushesha kakhulu kunamathuluzi okugaya amadayimane ebhondi yensimbi evamile, kodwa anolaka oluncane kunamathuluzi e-PCD angenayo ingxenye yomhlatshelo.Ingxenye yomhlatshelo ingaba ngesimo sikanxande(ibha), nxazonke(inkinobho), i-rhombus, umcibisholo njll.
Imodeli No. I-ZL-PCD-20
Umsebenzi Ukususwa kwe-coating
Ukusetshenziswa Imanzi futhi Yomile
Ukuxhumana I-Lavina ingaphakathi
Amathuluzi okugaya e-PCD e-Lavina asetshenziswa kakhulu ekususeni okokunamathela okuhlukahlukene okufana ne-epoxy, iglue, i-mastics, i-thinset, i-resin, upende, njll. Iza nepuleti le-Lavina wedge-in elizosetshenziswa emishinini yokugaya i-Lavina floor.
Okwedlule: I-Z-LION 5 ingxenye yomcibisholo engama-3inch amaphakhi wokugaya idayimane
Olandelayo: I-Z-LION izingxenye ezimbili zebhokisi lamapuleti okugaya ukhonkolo we-trapezoid
Ithuluzi lokususa i-trapezoid PCD lokukhuhla...
Isondo lenkomishi ye-PCD yokukhishwa kwe-coating ku-concrete f...